Sehatra maharitra fanomezana anjara biriky voalohany mivoaka ao Ekoadaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2015 10:07 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, русский, Español
Saripika: LendingMemo.com. (CC 2.0.)
Nanatri-maso ny fanokafana ny sehatra fitia-tsy-mba-hetra ao amin'ny sehatry ny Fandaharan'asa fampandrosoana ao amin'ny Firenena Mikambana ny tao Ekoadaoro tamin'ny volana lasa—tetikasa antsoina hoe Small Grants Program, izay niarahana notefena bika tamin'ny AlliedCrowds. Araka ny mpikarakara, ny tetikasa dia namboarina amin'ny “misaina ankapobeny sy miasa ao an-toerana“:
The program provides grants of up to $50,000 directly to local communities including indigenous people, community-based organizations and other non-governmental groups for projects in Biodiversity, Climate Change Mitigation and Adaptation, Land Degradation and Sustainable Forest Management, International Waters and Chemicals.
Ny fandaharanasa dia manome fanampiana mivantana hatramin'ny $50.000 amin'ny fiarahamonina eny ifotony toy ny teratany, fikambanana mifototra amin'ny fokonolona ary ireo vondrona tsy miankina amin'ny fanjakana misahana tetikasan-tontolo voajanahary, fampihenana na fampifanarahana ny fiovan'ny toetrandro, fihasimban'ny tany sy fandrindrana maharitra ny ala, rano sy akora shimika iraisampirenena.
Ilay sehatra fitia tsy mba hetra dia antsoina hoe GreenCrowds. Araka ny haba-tranonkala, dia mitady ny hitehirizana sy hamerina amin'ny laoniny ny tontolo iainana ny tetikasa, ankoatra ny zavatra hafa maro :
All greencrowds.org projects are part of the Small Grants Program (SGP), which was born during the Rio Summit in 1992. This is a corporate program of the Global Environment Facility (GEF), implemented by the United Nations Development Program (UNDP) and executed by the United Nations Office for Project Services (UNOPS).
By providing financial and technical support to projects that conserve and restore the environment while enhancing people's well-being and livelihoods, SGP demonstrates that community action can respond to human needs while addressing global environmental problems.
Ny tetikasan'ny greencrowds.org rehetra dia ao anatin'ny Small Grants Program (SGP), izay teraka nandritra ny Zaikaben'i Rio tamin'ny 1992. Ny tetikasan'ny greencrowds.org rehetra dia ao anatin'ny Small Grants Program (SGP), izay teraka nandritra ny Zaikaben'i Rio tamin'ny 1992. Izy io programam-bondron'orinasan'ny Global Environment Facility (GEF), nampidirin'ny Programam-Pampandrosoan'ny Firenena Mikambana (UNDP) ary tanterahin'ny United Nations Office for Project Services (UNOPS).
Amin'ny fanohanana ara-teknika sy ara-bola ny tetikasa izay mitahiry sy mamerina amin'ny laoniny ny tontolo iainana sady manatsara ny mahasoa ny olona sy ny zavamananaina, dia porofoin'ny SGP fa afa-mamaly ny filàn'olombelona amin'ny famahana ny olan'ny tontolo iainana ankapobeny ny hetsiky ny fiarahamonina.
Hanohana ireo fokonolona manana tetikasa mampiditra fomba vaovao sy mahazatra miaro ny tontolo iainana, sy manohana fianakaviana an'arivony any amin'ny faritra ambanivohitra ny GreenCrowds.org. Nivoaka tamin'ny 20 Novambra ny sehatra ary manantena ny hanangona $80.000 hatramin'ny janoary 2016 hanohanana ny nofinofin'ny fiarahamonina valo.
Ireo fiarahamonina hahazo tombontsoa amin'ny fisantaran'andraikitra dia miorina ao Chimborazo, Manabí, Pichincha, Intag, Chontapunta, Pastaza, ary El Tambo.